မိသားစု တာဝန်ထမ်းရင်း အသက် ၉ နှစ်နဲ့ ကြက်ကြော်ဆိုင် ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာတဲ့ ကောင်မလေး . . . – Pwintsan
မိသားစု တာဝန်ထမ်းရင်း အသက် ၉ နှစ်နဲ့ ကြက်ကြော်ဆိုင် ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာတဲ့ ကောင်မလေး . . .
မိသားစုတာဝန်ထမ်းရင်း အသက် ၉ နှစ်နဲ့ ကြက်ကြော်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာတဲ့ ကောင်မလေး
တချို့ကလေးတွေဟာ ဖြတ်သန်းရတဲ့ ဘဝအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ရောက်ရှိနေတဲ့ အသက်အရွယ်ထက် ပိုမို ရင့်ကျက်နေသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အသက် ၉ နှစ်ဆိုတဲ့ အရွယ်ဟာ ကလေးတော်တော်များများအတွက် ကျောင်းသွားမယ်၊ ကစားမယ်၊ အိပ်မယ်၊ စားမယ်ဆိုတာပဲ သိသေးတဲ့ အရွယ်မျိုးပါ။
ဒါပေမဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက Beel ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ချို့တဲ့တဲ့ မိသားစုတာဝန်တွေကို ထမ်းရင်း အသက် ၉ နှစ် အရွယ်လေးမှာပဲ ကြက်ကြော်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့ ပိုင်ရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ။
Beel ဟာ အခုဆိုရင် အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာလည်း နာမည်ကြီးနေပြီး လူအများရဲ့ ချီးကျူးမှုကို ခံယူနေရပါပြီ။
အကြောင်းကတော့ သူမဟာ ချစ်စရာကောင်းရုံတင်မကဘဲ အသက် ၉ နှစ်အရွယ်လေးနဲ့ ကြက်ကြော်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို တွဲဖက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီ ဖြစ်တာကြောင့်ပါပဲ။
သူမဟာ မိသားစုရဲ့အခက်အခဲတွေကို ဝန်ပေါ့အောင် ကူညီပေးချင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃ နှစ်အရွယ်လောက်ကတည်းက Beel တစ်ယောက် အိမ်မှာနေရင်း အဖွားလုပ်သူကို အိမ်အလုပ်လေးတွေ နိုင်သလောက် လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ရတာပါ။
Beel ရဲ့ မိဘတွေဟာ မကြာခင်က ကွာရှင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး Beel ကတော့ သူမရဲ့မောင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူ အဖွားအိမ်မှာ နေထိုင်ပါတယ်။
သူမရဲ့အဖွားဖြစ်သူဟာ ကြက်ကြော်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် ဖွင့်ထားပြီး အမြဲတမ်း အလုပ်ရှုပ်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ Beel ဟာ အဘွားဖြစ်သူကို ကြက်ကြော်ကူကြော်ပေးရင်း သူမဟာ ကြက်ကြော် ကြော်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သူဖြစ်ကြောင်း သိရှိလာရပါတယ်။
Beel တစ်ယောက် ကြက်ကြော်ကြော်ရာမှာ အံ့သြလောက်အောင် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တာကြောင့် အဘွားဖြစ်သူက သူမတစ်ယောက်တည်းကို လွှတ်ပေးထားလို့ ရတဲ့အထိပါပဲ။
ဆိုင်ကိုပုံမှန်လာရောက် စားသုံးသူတွေဟာလည်း Beel ရဲ့ တာဝန်ယူနိုင်မှုကို ချီးကျူးထောပနာ ပြုလေ့ရှိပါတယ်။ သူမဟာ အသက် ၉ နှစ်သာ ရှိသေးပေမယ့် အကြော်ကြော်တဲ့ ကိစ္စကအစ တစ်ဆိုင်လုံးကို စီမံခန့်ခွဲနေပြီး တကယ့်ကို ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်အတိုင်းပါပဲ။
Beel လေးဟာ ဆိုင်ကို စီမံခန့်ခွဲရသလို သူမရဲ့မောင်ငယ်နှစ်ယောက်ကိုလည်း ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရပါသေး တယ်။ သူမရဲ့အဘိုးအဘွားတွေ အလုပ်ရှုပ်နေချိန်မှာ သူမဟာ မောင်လေးတွေကို ထိန်းဖို့ တာဝန်ယူပါတယ်။
သူမတို့ဆိုင်ကို လာနေကျဖောက်သည်တစ်ယောက်က Beel ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ တာဝန်ယူနိုင်စွမ်းတွေကို တွေ့မြင်သွားပြီးတဲ့နောက် သူမရဲ့ဇာတ်ကြောင်းနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို အခုလို အွန်လိုင်းပေါ်တင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသကျ ၉ နှဈဆိုတဲ့ အရှယျဟာ ကလေးတျောတျောမြားမြားအတှကျ ကြောငျးသှားမယျ၊ ကစားမယျ၊ အိပျမယျ၊ စားမယျဆိုတာပဲ သိသေးတဲ့ အရှယျမြိုးပါ။
ဒါပမေဲ့ ထိုငျးနိုငျငံက Beel ဆိုတဲ့ ကောငျမလေးကတော့ ငယျငယျလေးကတညျးက ခြို့တဲ့တဲ့ မိသားစုတာဝနျတှကေို ထမျးရငျး အသကျ ၉ နှဈ အရှယျလေးမှာပဲ ကွကျကွျောဆိုငျတဈဆိုငျရဲ့ ပိုငျရှငျတဈယောကျ ဖွဈနပေါပွီ။
Beel ဟာ အခုဆိုရငျ အငျတာနကျစာမကျြနှာတှမှောလညျး နာမညျကွီးနပွေီး လူအမြားရဲ့ ခြီးကြူးမှုကို ခံယူနရေပါပွီ။
အကွောငျးကတော့ သူမဟာ ခဈြစရာကောငျးရုံတငျမကဘဲ အသကျ ၉ နှဈအရှယျလေးနဲ့ ကွကျကွျောဆိုငျတဈဆိုငျကို တှဲဖကျပိုငျဆိုငျထားပွီ ဖွဈတာကွောငျ့ပါပဲ။
သူမဟာ မိသားစုရဲ့အခကျအခဲတှကေို ဝနျပေါ့အောငျ ကူညီပေးခငျြသူ ဖွဈပါတယျ။ အသကျ ၃ နှဈအရှယျလောကျကတညျးက Beel တဈယောကျ အိမျမှာနရေငျး အဖှားလုပျသူကို အိမျအလုပျလေးတှေ နိုငျသလောကျ လုပျကိုငျပေးခဲ့ရတာပါ။
Beel ရဲ့ မိဘတှဟော မကွာခငျက ကှာရှငျးခဲ့ကွတာဖွဈပွီး Beel ကတော့ သူမရဲ့မောငျလေးနှဈယောကျနဲ့အတူ အဖှားအိမျမှာ နထေိုငျပါတယျ။
သူမရဲ့အဖှားဖွဈသူဟာ ကွကျကွျောဆိုငျလေးတဈဆိုငျ ဖှငျ့ထားပွီး အမွဲတမျး အလုပျရှုပျနသေူ ဖွဈပါတယျ။ Beel ဟာ အဘှားဖွဈသူကို ကွကျကွျောကူကွျောပေးရငျး သူမဟာ ကွကျကွျော ကွျောရာမှာ ကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျသူဖွဈကွောငျး သိရှိလာရပါတယျ။
Beel တဈယောကျ ကွကျကွျောကွျောရာမှာ အံ့သွလောကျအောငျ ကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျတာကွောငျ့ အဘှားဖွဈသူက သူမတဈယောကျတညျးကို လှတျပေးထားလို့ ရတဲ့အထိပါပဲ။
ဆိုငျကိုပုံမှနျလာရောကျ စားသုံးသူတှဟောလညျး Beel ရဲ့ တာဝနျယူနိုငျမှုကို ခြီးကြူးထောပနာ ပွုလရှေိ့ပါတယျ။ သူမဟာ အသကျ ၉ နှဈသာ ရှိသေးပမေယျ့ အကွျောကွျောတဲ့ ကိစ်စကအစ တဈဆိုငျလုံးကို စီမံခနျ့ခှဲနပွေီး တကယျ့ကို ဆိုငျပိုငျရှငျတဈယောကျအတိုငျးပါပဲ။
Beel လေးဟာ ဆိုငျကို စီမံခနျ့ခှဲရသလို သူမရဲ့မောငျငယျနှဈယောကျကိုလညျး ကွညျ့ရှုစောငျ့ရှောကျရပါသေး တယျ။ သူမရဲ့အဘိုးအဘှားတှေ အလုပျရှုပျနခြေိနျမှာ သူမဟာ မောငျလေးတှကေို ထိနျးဖို့ တာဝနျယူပါတယျ။
သူမတို့ဆိုငျကို လာနကေဖြောကျသညျတဈယောကျက Beel ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျနဲ့ တာဝနျယူနိုငျစှမျးတှကေို တှမွေ့ငျသှားပွီးတဲ့နောကျ သူမရဲ့ဇာတျကွောငျးနဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှကေို အခုလို အှနျလိုငျးပျေါတငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။